LG UltraFine 5K Monitors na-egbu oge mbupu ruo mgbe March 15 | Esi m mac
LG UltraFine 5K Monitors na-egbu oge mbubata ya rue Machị 15
Ngwaọrụ LG UltraFine 5K dị ugbu a ọzọ maka ịzụrụ, na weebụsaịtị Apple na mbupu na mba anyị Ha egbuola oge ntakịrị karịa ka atụ anya ya na ụbọchị mbupu n'etiti March 15 na 22, ya mere na ọ bụghị na ọ bụ mbupu ozugbo. Na ụkpụrụ, a na-atụ anya na ahịa ga-amalite ọzọ site na 9 nke ọnwa a mana ọzọ enwere igbu oge na weebụ na ndị nlekota ndị a dochie ihe ngosi Thunderbolt ma na-akpata ezigbo isi ọwụwa maka Apple na ndị ọrụ chọrọ ime ya. uru ndị yiri ya na ụlọ ahịa ụlọ ọrụ.
N'ọnọdụ ọ bụla, ihe dị mkpa na nke a bụ na ndị ọrụ zụrụ akụrụngwa a maara na ndị nlele ọhụụ a edozila nsogbu ahụ. Nsogbu a mara ọtụtụ ndị ọrụ Apple mana ọ bụrụ na onye ọ bụla amaghị ya ndị nlele a nwere mkpuchi na-adịghị mma n'ime ime na-akpata nsogbu na njikọta WiFi. Ugbu a, ha niile nwere nsogbu edozila mana o doro anya na "unyi" na aha ha ma ọ nweghị onye ga-ewepụ ya.
Allbọchị niile enyere maka nloghachi nke LG UltraFine 5K ndị nlele a bụ ntakịrị ihe akaebe na ọ bụ na igbu oge na-adị mgbe niile, ma ọ bụ n'ihi ụkọ ngwaahịa ma ọ bụ naanị n'ihi nkesa nke ndị a n'onwe ya. Jide n'aka na Apple na Cook na-eche ụzọ ndị ọzọ maka ọdịnihu mgbe nsogbu nke ha na ndị nlekota a na-enwe na a ghaghị ikwu ihe niile, ha dị ịrịba ama na mkpebi, agba na ndị ọzọ, ma ọtụtụ nsogbu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » LG UltraFine 5K Monitors na-egbu oge mbubata ya rue Machị 15
N'ikpeazụ Twitterrific na-abịa na macOS